Part 1: Gịnị ibudata codec maka Windows Media Player?
Nkebi nke 2: Olee otú Download codecs-akpaghị aka na Windows Media Player maka Windows XP
Nkebi nke 3: Download-atọ ndị ọzọ Windows Media Player codec
Nkebi nke 4: Ọ dị mma ibudata-atọ ndị ọzọ codecs?
E nwere ọtụtụ n'ozuzu nakwa dị ka ihe pụrụ iche ihe na ga-ekwe ka ndị ọrụ mara na ihe mere a codec ma ọ bụ codec mkpọ ga-arụnyere maka Windows Media Player dị ka ndị a bụ n'ozuzu extensions na-eme ka n'aka na onye ọrụ bụ ike igwu egwu dị iche iche faịlụ enweghị ihe ọ bụla nke na- nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ na-esonụ ihe na-nọ na n'uche mgbe wụnye Windows Media Player Codec Pack:
n Ukwuu n'ime ikwunye-ins bụ ọrụ enyi na enyi na ha na-eme n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu nkà na ụzụ na ala nke iji na-nyere ka onye ọrụ na nke a.
Ha na-mgbe emelitere na mmepe jide n'aka na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla mbipụta na nke a mgbe ọ na-abịa ayak faịlụ
The nhazi nke splitters na decoders dị mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ na nke a na ya mere ha na-enye a elu larịị nke mgbanwe.
Nkwụnye-ins na-eji ọtụtụ ebe na ya mere ihe iseokwu na nsogbu ndị na-ihu na-kwara na kpebiri ngwa ngwa
E nwere ọtụtụ ụzọ na-eme ka n'aka na WMP codecs na-arụnyere mere na ugboro ugboro zutere okwu na-abụghị nanị kpebiri ma onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe na-arụ ọrụ na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ukara ụzọ nke na nbudata na codecs e kwuru na URL https://support.microsoft.com/en-us/kb/291818 ebe onye ọrụ nwere ike ime ka n'aka na ọ bụghị nanị na nke nwere e kpebiri ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma na nke a. The screenshot nke isiokwu bụ dị ka n'okpuru:
The ụzọ na e kwuru ebe a bụ ndị na-bụ ndị kasị mma na n'elu ihe nile ha niile bụ ndị ukara na Ya mere, mmejuputa iwu nwere ike mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-soro ibonke ọ bụla dị ka ha ga-ọ bụghị nanị na-eduga nsonaazụ kacha mma ma ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị ịkpọ isiokwu a mgbe ọ bụla a codec echichi a chọrọ ka ọ ga-ahụ na onye ọrụ bụghị nanị na osịmde arụpụta ihe kasị mma kamakwa ala nke nkà Usoro na ike-etinyere iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri soonest kwere omume.
Usoro a ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma maka ngwaahịa nke e nweghị nkwado awa site Microsoft. The mfe ma ịtụnanya asụsụ nke isiokwu na-emekwa ndị ọrụ emebibeghị na Ya mere echichi na nzọụkwụ ndị ọzọ na-aghọkwa mfe dị ka a na-agụ na-elu na ọ nkuzi na-akawanye ọzọ oru. The mfe atọ nzọụkwụ usoro ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ọkaibe eweta maka niile ụdị windows media ọkpụkpọ.
The mfe usoro bụ ihe na idu na isi nke niile nkuzi na maka otu ihe ahụ ọ bụ ihe kasị mma na ọkaibe isiokwu na-eme ka a ukara ụzọ na nbudata na wụnye codec dị ka otu n'ime ndị kasị mma nke niile. Onye ọrụ kwesịrị mere jide n'aka na a na nkuzi-agbaso dị ka a ikpeazụ resotu mgbe ọ na-abịa wụnye codecs enweghị ihe ọ bụla nke na mma mmasị nke kọmputa nakwa dị ka onye ọrụ.
E wezụga ukara ụzọ e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ma ọ bụ unofficial ụzọ nke na-n'aka na codec ebudatara na arụnyere na mma mmasị nke onye ọrụ na onye maka otu ihe ahụ nke akụkụ a nke nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na nke a banyere site na isoro usoro na e kwuru n'okpuru doro nkọwa.
The mgbasa ozi ọkpụkpọ codec mkpọ emi odude ke URL http://download.cnet.com/Media-Player-Codec-Pack/3000-13632_4-10749065.html bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe codec mkpọ nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị kasị elu codec mkpọ nrụnye. Ọ na-emekwa n'aka na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na ụdị format nakwa dị ka n'ozuzu audio nkwado a na-nyere ka onye ọrụ na nke a. Niile formats ndị na-amabughị na mbụ ka WMP ga ugbu a adị egwuregwu dị ka nke a codec mkpọ ana achi achi na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a. The webpage nke codec e gosiri dị ka n'okpuru:
Olee otú ibudata na wụnye
Na-esonụ bụ nzọụkwụ na a ga-soro na nke a
1.The faịlụ na bụ unplayable bụ a ga-emeghe na WMP mere na njehie kpaliri:
2.The web enyemaka bụ mgbe ahụ na-pịrị:
3.The njikọ nke WMplugins kwesịrị-ahụ ga-pịrị:
4.The nkwụnye na njikọ bụ mgbe ahụ ka-pasted n'ime search mmanya ie http://download.cnet.com/Media-Player-Codec-Pack/3000-13632_4-10749065.html
5.All installer ntụziaka na-ga-agbaso iji jide n'aka na ọ abịa arụnyere na onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na mgbasa ozi na ọkpụkpọ ịkwụsị ma malite ọzọ mezue usoro na wụnye codec mkpọ na zuru. Onye ọrụ ga-enwe ike ịdị na-egwu unplayable faịlụ ozugbo ọkpụkpọ malitere ọzọ, sị:
Azịza ajụjụ a bụ nnọọ mgbagwoju na maka otu ihe ahụ ọ na-e kewara abụọ n'akụkụ nke na-n'aka na onye ọrụ oke na-abụghị nanị nyere mmasị ma ha na-esi mara na a ga a codec-arụnyere ma ọ bụ dabeere na ha onwe ha ikpe. Mgbe na-aga site kpọkwara na demerits onye ọrụ ga-maa na-a doo anya:
Mpụga codec ngwugwu ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na faịlụ na-egwuri were were.
Ndị a ngwugwu na-e izute mkpa ụfọdụ nke ọrụ.
All mpụga codec ngwugwu ndị dị mfe iji wụnye na ịnọgide na-enwe.
The codec ngwugwu jide n'aka na ndabara nhazi nke ọkpụkpọ na-akwado n'ikpeazụ enwekwukwa.
Ndị a codec ngwugwu ka a otutu mbipụta gụnyere n'ozuzu configurations njehie na yiri mbipụta
The codec ngwugwu egbochi ndị nkịtị na-arụ ọrụ nke ndị ọzọ na nkwụnye ins ịkpọlite ​​mbipụta na nsogbu na nke a.
Onye ọrụ nwere imelite nkwụnye-ins ugboro ugboro na ya mere ọ dị a hassle.
> Resource> WMP> 3 Atụmatụ banyere Windows Media Player codec